Tamin'ny tapany voalohan'ny taona dia namokatra bateria lithium-ion 7.15 miliara sy bisikileta elektrika 11.701 tapitrisa i Sina
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, anisan'ny vokatra lehibe amin'ny indostrian'ny famokarana bateria ao Shina, ny famokarana bateria lithium-ion dia 7.15 miliara, miaraka amin'ny fiakarana 1,3% isan-taona; ny vokatry ny bisikileta herinaratra dia 11.701 tapitrisa, miaraka amin'ny fiakarana 10,3% isan-taona. Raha ny filazan'ny we ...
Ny fiakaran'ny vidin'ny kobalt dia nihoatra ny andrasana na hiverina amin'ny ambaratonga mirindra
Tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020, 16800 taonina ny totalin'ny importa ho an'ny kobalta, miaraka amin'ny fihenan'ny 19% isan-taona. Anisan'izany, ny totalim-bidy avy amin'ny koba koba dia 0100 taonina taonina vy, miaraka amin'ny fihenan'ny 92% isan-taona; ny totalin'ny fanafarana vokatra mpanelanelan'ny coba ...
Ny bateria lithium dia niaina ny fanoloana ny batterie nickmi cadmium ary avy eo ny batterie hidrogen hidrogen. Raha ny fahitana ny maridrefy tsena, ny haben'ny tsenan'ny bateria lithium ho an'ny fitaovan'ny herinaratra dia hahatratra 9.310 miliara yuan amin'ny taona 2019, ary ny maridrefin'ny bateria lithium ho an'ny herinaratra ...
Tamin'ny 22 aogositra 2018, teo ambanin'ny fandaminana ny foibem-pitantanana ny harena voajanahary, ny mpiasa sasany ao amin'ny TRUE POWER dia nitondra fiara adiny iray nankany amin'ny tobin'ny hotely Jinsha bay ary nanomboka ny fiofanana momba ny fampandrosoana iray andro. Nihoraka sy nihomehy ny rehetra ary avo ny atmosfera. Ny tanjon'ity ex ...
Tamin'ny 12 Oktobra 2019, ny Hong Kong Electronic Exhibition karakarain'ny loharanon-karena manerantany dia natao tao amin'ny Asia International Expo any Hong Kong. TRUE POWER dia asaina handray anjara amin'ny fampirantiana, booth No.
Fanadihadiana momba ny bateria lithium sy ny indostrian'ny fiara vaovao
Ao anatin'ny sehatry ny fivoaran'ny fiara mpitondra angovo vaovao, fiara elektrika 2.2 tapitrisa no amidy eran-tany tamin'ny taona 2019, fiakarana 14,5% isan-taona, nahitana 2.5% ny totalin'ny varotra fiara. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny resaka varotra fiara angovo vaovao, ny BYD dia laharana faharoa avy amin'i Tesla. Tao anatin'ny 19 taona ...
3.7 bateria azo haverina, Li Battery, Lithium Ion Polymer Battery, 18650 Nimh, Kitapo bateria Lithium azo haverina 12 Volt, Battery bateria azo averina 12v Lithium, Vokatra rehetra